घर जग्गा, व्यवसाय वा राष्ट्रिय विकास कोषमा लगानी गरेर नागरिकता कार्यक्रम अन्तर्गत एन्टिगा र बार्बुडाको नागरिकता प्राप्त गर्न सम्भव छ।
त्यहाँ प्रत्यक्ष निवासको लागि कुनै आवश्यकता छैन;
विश्व आय को हिसाबले कुनै कर छैन;
आवास - केवल पाँच दिन, पाँच बर्षको लागि;
शिक्षा, व्यवस्थापन अनुभव को लागी कुनै आवश्यकता छैन;
ह Hongक Kong, ग्रेट ब्रिटेन लगायत १ the० भन्दा बढी देशहरू भ्रमण गर्ने अवसर पाउँदैछ, साथ साथै शेन्जेन क्षेत्रमा समावेश भएका देशहरू;
minor महिना भन्दा बढीको अवधिमा रसिद, नाबालिग बच्चाहरू, साथै २ 25 वर्ष मुनिका बच्चाहरू सहित;
प्रत्यक्ष आवेदकको साथ living 65 बर्ष भन्दा कम उमेरका आमाबुवाहरूको लागि नागरिकता दर्ता;
आधिकारिक कागजातहरूको सम्भव रसिद, लगानीको मिति देखि days० दिन भन्दा बढि अवधिमा;
स्थायी निवास को लागी अनुकूल क्षेत्र।
कसरी एन्टिगा र बार्बुडाको नागरिकता प्राप्त गर्ने:
अमेरिकी डलर १०,००० - प्रत्यक्ष आवेदक प्लस care जना हेरचाहमा,
US $ १२००,००० को राशिमा - प्रत्यक्ष आवेदक प्लस 125 जना हेरचाहमा।
२. राज्य प्रमाणित घर जग्गामा लगानी गरेर:
विचाराधीन कार्यक्रमको रूपरेखा भित्र, अधिग्रहित घर जग्गाको लागत कम्तिमा approved०० हजार अमेरिकी डलर पूर्व अनुमोदित योजनाहरुमा हुनुपर्दछ। सम्पत्ति कम्तिमा five बर्षको लागि हुनुपर्दछ। सम्पत्तीमा शीर्षक दर्ता, रेजिष्ट्रेसन लागत र कर भुक्तानी सम्पत्ति आफैंको अधिग्रहण लागतको अधिकमा भुक्तान गरिन्छ।
Entreprene. उद्यमशीलताको संगठन
आवेदकले व्यवसाय सुरु गर्न र एन्टिगा र बार्बुडाको नागरिकता प्राप्त गर्न १ लाख thousand०० हजार अमेरिकी डलरको लगानी गर्नुपर्नेछ। साथै, लगानी सामूहिक हुन सक्छ। यस अवस्थामा, प्रत्येक उम्मेद्वारको न्यूनतम अमेरिकी डलर $००,००० हो, कुल न्यूनतम $ million मिलियन हो।
अमेरिकी डलर २$,००० - applic आवेदकहरू सम्म;
अमेरिकी डलर १,15,००० - प्रत्येक पछि आवेदक।
US $7- प्रत्यक्ष आवेदक;
अमेरिकी $ ,,4०० - १ 500 र २ 18 वर्ष बीचको हेरचाहमा रहेको व्यक्ति;
अमेरिकी डलर २,००० डलर - १२ देखि १ old वर्ष उमेरको हेरचाह गर्ने व्यक्ति।